मधुमेह जागरूकता महिनामा फार्मासिष्टको भूमिका - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर कम्पनी, औषधि जानकारी मनोरञ्जन प्रेस कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कल्याण समुदाय, कम्पनी समुदाय औषधि जानकारी खेलहरु
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> तपाईंको फार्मासिष्टले कसरी मधुमेह शिक्षाको साथ राष्ट्रिय मधुमेह महिनाको समयमा मद्दत गर्न सक्छ जान्नुहोस्
तपाईंको फार्मासिष्टले कसरी मधुमेह शिक्षाको साथ राष्ट्रिय मधुमेह महिनाको समयमा मद्दत गर्न सक्छ जान्नुहोस्
नोभेम्बरदेखि राष्ट्रिय मधुमेह महिना शुरू हुन्छ, यो समय देशभर मधुमेहको प्रभाव र हामी मधुमेह रोगीहरूलाई सहयोग गर्न के गर्न सक्छ के बारे जागरूकता फैलाउन समर्पित समय हो। राष्ट्रिय मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस भनेर पनि चिनिन्छ, नोभेम्बर १ on हो।
मधुमेह संयुक्त राज्यको सबैभन्दा सामान्य स्वास्थ्य अवस्था मध्ये एक हो - यसले भन्दा बढी असर गर्दछ Million करोड अमेरिकीहरू , संयुक्त राज्य अमेरिका रोग नियन्त्रण र रोकथाम (CDC) का अनुसार। धेरै अधिक मधुमेह को एक जोखिम खतरामा छन्, विशेष गरी यदि तिनीहरू निदान गरिएको छ पूर्वानुमान ।
भाग्यवस, फार्मासिष्टहरू दुबै अस्पताल र सामुदायिक सेटि inहरूमा मधुमेह सम्बन्धी जागरूकता फैलाउन एक ठूलो स्थितिमा छन्। तिनीहरू आफ्ना बिरामीहरू र जो-जोसँग यो रोगको जोखिममा पर्ने खतराको लागि मधुमेह शिक्षकहरूको रूपमा काम गर्न सक्दछन्।
किन मधुमेह जागरूकता महत्व छ
मधुमेह भएका मानिसहरूलाई सामान्यतया कि त टाइप १ वा टाइप २ मधुमेहबाट प्रभावित हुन्छन्। टाइप १ र टाइप २ मधुमेह बाहेक, प्रेडियबिटीज र गर्भकालीन मधुमेह (गर्भावस्थामा मधुमेह) पनि कुनै असामान्य हुँदैनन्। अझै पनि, धेरै व्यक्ति मधुमेहसँग सम्बन्धित जोखिम र स्वास्थ्य जटिलताहरू बारे अनजान छन्। सबै पछि, साथ उच्च रक्तचाप , यो कहिलेकाँही मौन हत्यारा ठानिन्छ।
खतरनाक उच्च रगतमा चिनीको स्तरले परिभाषित, मधुमेह कहिलेकाँही लामो समयको लागि ध्यानाकर्षण गर्न सक्दछ जब सम्म यो पहिले नै केही क्षति नभएसम्म। त्यहाँ निदान गरिएको बिरामीहरूलाई अनुभव गर्न कुनै वास्तविक तरीका छैन यदि उनीहरूसँग उच्च ग्लूकोजको स्तर छ भने। ध्यान नदिई प्रगति गर्ने मौका दिईएमा, मधुमेहले गम्भीर जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै मुटुको रोग, मृगौला रोग, र स्नायु क्षति, अरूमा।
यी जटिलताहरूका कारण, यो तपाइँको डाक्टर संग वार्षिक चेकअप गर्न जारी राख्न महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले सामान्यतया तपाईंको रक्तचाप, तपाईंको रगत ग्लुकोज स्तर, र अन्य जोखिम कारक तपाइँ जोखिममा हुन सक्दछ भनेर निर्धारण गर्न। निस्सन्देह, तपाईको पारिवारिक इतिहास र अन्य स्वास्थ्य अवस्थाहरू पनि जब मधुमेहको जोखिमको आकलन गर्दा पनि ध्यानमा राखिने छ।
फार्मासिष्टहरूले कसरी मधुमेह जागरूकता फैलाउन मद्दत गर्न सक्छन्
यदि तपाईं वा तपाईंको प्रियजनहरूले बीमाको साथ कठिनाइहरूको सामना गरिरहनु भएको छ वा सही मधुमेह हेरचाह पाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले निर्देशनको लागि आफ्नो छिमेकी फार्मासिष्टलाई भेट्न सजिलो महसुस गर्नुपर्छ।
स्क्रिनिंग र शिक्षा
फार्मेसीहरूले स्वास्थ्य मधुमेह शिक्षामा ध्यान केन्द्रितको साथ स्क्रीनिंग राख्छ। यी स्क्रीनिंगहरू सामान्यतया सार्वजनिक, फार्मेसी बिरामीहरू, र उनीहरूका प्रियजनहरूका लागि खुला छन्। यी स्क्रीनिंगमा फार्मेसी स्टाफ, फार्मेसी विद्यार्थी, वा मेडिकल स्वयंसेवकहरू ग्लूकोज मोनिटरिंग टेस्टहरू गर्नको लागि उपलब्ध छन्। मधुमेह वा पूर्वानुमान मधुमेह रोगीहरूले पनि आफ्नो उपचार लक्ष्यहरुमा छलफल गर्ने अवसर हुन्छन् र उनीहरूलाई हुन सक्ने कुनै पनि चिन्ताको बारेमा शिक्षित हुन सक्छन्।
फार्मासिष्टहरूले जटिलताहरूको जोखिम कम गर्न सहयोगको लागि आहार र जीवनशैली परिवर्तनहरू पनि सिफारिस गर्न सक्छन्। यी सिफारिशहरू अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन (एडीए) का लागि कम कार्बोहाइड्रेट खाने बान्की
मधुमेह भएका धेरै मानिसहरू अक्सर फार्मेसीमा जान्छन् उनीहरूको औषधी लिन मात्र होइन तर रगत ग्लुकोज मोनिटरहरू वा कम्प्रेसन स्टोकिंगहरू जस्ता अन्य उत्पादनहरू पनि फेला पार्न। फार्मासिष्टहरूले बिरामीहरूलाई केही उपकरणहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउन सहयोग गर्न सक्छन् जुन उनीहरूका डाक्टरहरूले सिफारिस गरेका हुन सक्छन्। यसका साथै फार्मासिष्टले पनि शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ कसरी आपूर्ति मा बचत गर्न र औषधिहरू।
मधुमेह रोगीहरूको उपचारमा औषधी महत्वपूर्ण छ। डायबेटिस अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि सही मधुमेह औषधी निरन्तर नलिन गम्भीर स्वास्थ्य परिणाम हुन सक्छ।
किनकि बिरामीहरूले एकै ठाउँमा आफ्नो औषधीहरू पाउँदछन्, फार्मासिष्टले सूचना सतर्कताका रूपमा कार्य गर्न सक्दछ यदि तिनीहरूले बिरामीको स्वास्थ्य र औषधि ईतिहासमा कुनै अनौंठो भेट्टाए। उदाहरणका लागि, भन्नुहोस् मेरी फार्मेसीमा आउँछिन् र फार्मासिस्टले महसुस गर्छिन् कि उनीले लेट गरेकी उनको मेटफॉर्मिन लिन। यो फार्मासिष्टको लागि उनलाई सही तरीकाले उनी कसरी मधुमेह व्यवस्थापन गरिरहेको छ भनेर सोध्ने अवसर हो। फार्मासिस्टले सक्रिय श्रवण कौशल प्रयोग गर्न सक्दछ कि यो निर्धारण गर्न मरियम चिन्तित छ metformin का साइड इफेक्टहरू वा यसलाई पूरै लिन बिर्सनुभयो। त्यस पछि फार्मासिष्टले समस्याको आधारमा औषधी वा खुराकमा सम्भावित परिवर्तनहरूको लागि उनको डाक्टरसँग कुरा गर्ने सल्लाह दिन सक्छ।
अन्य समय, एक बिरामी एक औषधी उपचार प्रबन्ध (MTM) समीक्षा आफ्नो औषधीहरु मा जानका लागि तालिका दिन सक्छ। यी समीक्षाहरूमा, फार्मासिष्टले बिरामीसँग बढी समय खर्च गर्न सक्दछ केही निश्चित औषधीहरू लिनको लागि सही तरिका, सम्भावित साइड इफेक्टहरू, औषधि अन्तर्क्रिया, र अन्य महत्वपूर्ण चीजहरू बारे औषधिको बारेमा जान्नको लागि। फार्मासिष्टले कसरी औषधीले काम गर्छ र कसरी यसले जटिलताहरूलाई रोक्न मद्दत गर्दछ भनेर सिकाउँदछ, जस्तै किडनी असफलता, स्नायु क्षति, र हृदय रोग, लामो अवधिमा।
मधुमेह औषधीमा बचत
यदि तपाईं यी लोकप्रिय मधुमेह औषधीहरू मध्ये एक लिइरहनुभएको छ भने, तपाईंको फार्मासिष्टले तपाईंलाई बचत गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यदि तपाईं अत्यावश्यक औषधि लिन असमर्थ हुनुहुन्छ भने, फार्मासिष्टहरूले तपाईंलाई तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कम खर्चिलो औषधिमा संक्रमण गर्न मद्दत गर्न सक्छ Sing वा तपाईंलाई सिंगलकेयर जस्ता प्रिस्क्रिप्सन बचत कार्ड प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
नाम वर्गीकरण खुराक फारम विशिष्ट खुराक एकलकेयर मूल्य एकलकेयर बचत
रियोमेट (मेटफर्मिन) Biguanide मौखिक ट्याब्लेट Mg०० मिलीग्राम दैनिक दुई पटक । 00.०० कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Glynase (glyburide) सल्फोनीलुरेआ मौखिक ट्याब्लेट २. to देखि mg मिलीग्राम एक पटक दिनको पहिलो खानाको साथ .6 ११.66 कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
प्रान्डिन (रिप्याग्लिनाइड) मेग्लिटाइन मौखिक ट्याब्लेट जब HbA1c हुन्छ<8%, 0.5 mg with each meal.
जब HbA1c meal 8% छ, 1 वा2मिलीग्राम प्रत्येक खानाको साथ .4 .4$.9 कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
जानुविया (सिटागलिप्टिन) DPP-4 अवरोधकर्ता मौखिक ट्याब्लेट १०० मिलीग्राम एक पटक खानाको साथ वा बिना दैनिक । 392.75 कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
भिक्टोजा (लीराग्लुटाइड) GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट तलको इंजेक्शन ०..6 मिलीग्राम पहिलो पटकको लागि एक पटक, र १.२ मिलीग्राम दैनिक एक पटक66..93 कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
जर्डियन्स (एम्पाग्लिफ्लोज़िन) SGLT2 अवरोधकर्ता मौखिक ट्याब्लेट १० मिलीग्राम दैनिक बिहान एक पटक2432.94 कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
ल्यान्टस (इन्सुलिन ग्लार्जिन) इन्सुलिन तलको इंजेक्शन सुरुमा, प्रति दिन १० एकाईहरू। ग्लूकोज स्तर र उपचार लक्ष्यहरूको आधारमा खुराक समायोजित । 70.20 कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
मधुमेह रोक्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
मधुमेह गम्भीर अवस्था हो, तर केहि अवस्थाहरूमा यो रोक्न सकिन्छ। धेरै नै कम्तिमा पनि, तपाईंले आफ्ना प्रियजनहरूलाई यी चरणहरू मार्फत निदान नगरी बस्ने जटिलताको जटिलताबाट जोगिन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
नियमित चेकअप अनुसूची गर्नुहोस्
तपाईंको वार्षिक डाक्टर भ्रमणहरूको तालिका निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको परिवार र साथीहरूलाई पनि त्यस्तै गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्, विशेष गरी जो मधुमेह रोगी छन्। तपाईं आफ्ना प्रियजनहरूसँग उनीहरूको रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल स्तरहरूको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, जसले मधुमेह जटिलताको जोखिममा भूमिका खेल्न सक्छ ।
स्वस्थ जीवन शैली छनौट गर्नुहोस्
तपाईं आफ्नो परिवार र साथीहरू माझ स्वस्थ खाना र जीवनशैली परिवर्तनहरूका लागि पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। शारीरिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुने प्रयास गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो प्रियजनहरूसँग समय खर्च गर्नुहुन्छ, यदि यो पार्कको वरिपरि हिंड्ने जत्तिकै सानो छ भने। उनीहरूसँग आहार परिवर्तनहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् जुन मधुमेह सुधार गर्न र स्वस्थ बानीहरूलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ।
राष्ट्रिय मधुमेह जागरूकता महिनाको लागि निलो लगाउनुहोस्
विश्वभरका व्यक्तिहरूले निलो घेरालाई मधुमेहको विश्वव्यापी प्रतीकको रूपमा पहिचान गर्न सक्दछन्। द्वारा परिचय अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह संघ (IDF) , नीलो घेराले विश्वव्यापी मधुमेह समुदायमा एकता प्रतिनिधित्व गर्दछ। तपाईं नीलो वा आधिकारिक निलो सर्कल लोगो लगाएर राष्ट्रिय मधुमेह जागरूकता महिनाको लागि आफ्नो समर्थन देखाउन सक्नुहुन्छ। यसले कसैसँग कुराकानी गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जो के प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर थाहा छैन।
स्क्रीनिंगमा भाग लिनुहोस्
तपाईं स्क्रीनिंगमा उपस्थित भएर र साथी वा परिवारको सदस्यलाई आफूसँगै ल्याएर तपाईंको जोखिम सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको फार्मेसीले पहिले नै त्यसो गरिरहेको छैन भने, तपाईं आफ्नो फार्मासिष्टलाई मधुमेह स्वास्थ्य स्क्रीनिंग दिनहरू राख्न प्रोत्साहन दिन सक्नुहुन्छ। समुदायको एक सक्रिय हिस्सा हुनु अन्ततः मधुमेह को जागरूकता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।
संगठनहरूसँग अप टु डेट रहनुहोस्
त्यहाँ धेरै संस्था र संसाधनहरू छन् जसले मधुमेह भएका मानिसहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछन्। तपाईं JDRF, एक गैर-नाफामुखी संस्था हो जसले नेतृत्व गरिरहेको छ को रूपमा संगठनलाई चन्दा दिन सक्नुहुन्छ विश्वव्यापी प्रकार १ मधुमेह अनुसन्धान प्रयास नयाँ, प्रभावकारी उपचारहरू फेला पार्न मद्दत गर्न। अन्य संगठनहरुमा मधुमेह अधिवक्ता एलायन्स, नेशनल किडनी फाउण्डेशन, र मधुमेह र पाचन र गुर्दा रोगहरु को राष्ट्रिय संस्थान। अन्य उपयोगी संसाधनहरू डायबिटीज.org मा भेट्टाउन सकिन्छ, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन (एडीए) को साइट।
तपाइँ कती छिटो योजना बी लिनु पर्छ
फार्मासिष्टहरू र बिरामीहरू एकै किसिमले राष्ट्रिय मधुमेह महिनाको प्रबर्धन गर्न धेरै प्रकारका मद्दत गर्न सक्छन्। डायबेटिससँग सम्बन्धित जोखिम र जटिलताहरूको बारेमा जागरूकता फैलाएर, हामी प्रभावित व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवनको समग्र जीवनस्तर सुधार गर्न चाहिने उपचार प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। त्यस तरीकाले, अधिक र अधिक व्यक्तिहरू लामो, स्वस्थ जीवन जिउन सक्दछन्।
35 पुरुषहरु को लागी सर्वश्रेष्ठ सेक्स खेलौना: तपाइँको अन्तिम गाइड
पुरुषहरु एक महिला बाट खमीर संक्रमण प्राप्त गर्न सक्छन्
बिमा बिना गोली को मूल्य कति छ?
xanax लाई किक लाग्न कति समय लाग्छ?
एक नाक बग्ने रोक्न को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि
toenail कवक स्याउ साइडर सिरका र लिस्टेरिन